‘एक्लै बसेर पढ्दा अलि स्मरणीय हुन्छ’ -::DainikPatra
एसईईमा ४ जिपिए ल्याउने विद्यार्थीहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा न्यून नै छ । तर रूपन्देही भने शिक्षाको क्षेत्रमा अगाडि छ । न्यूु होराईजन इङ्ग्लिस बोर्डिङबाट ४ जिपिए ल्याउन सफल छात्रा सुम्निमा श्रेष्ठको भने डाक्टर बनेर जनताको सेवा गर्ने रहर छ । उनै श्रेष्ठसँग दैनिक पत्रका लागि पूजा पन्थीले तयार पारेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
एसईई त सफल तरिकाले उत्तीर्ण हुनुभयो, अब कुन विषय अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ ?
सबैको रुचि फरक फरक हुन्छ । तर मेरो अध्ययनको रुचि भनेको साइन्स हो । हुन त धेरै विद्यार्थीको रोजाईको विषय बन्छ साइन्स तर मेरो लागि यसको भूमिका भने धेरै फरक छ । म मेडिकल लाइनमा जानको लागि यो विषयबाट आफ्नो अध्ययन शुरु गरेकी छु ।
साइन्समै रुचि किन ?
मलाई कुल लेबलमा नै साइन्समा रुचि थियो । शिक्षकहरूको पनि सल्लाह यही थियो । सबैको खुसी र सहमतिसँगै मेरो त रुचिको विषय नै थियो त्यसैले खुसीसाथ म अध्ययन शुरु गरेँ ।
सबै विद्यार्थीहरूको रुचि साइन्स किन होला ?
मेरो विचारमा साइन्स अध्ययन गरेको खण्डमा धेरै अवसरहरू आउँछन् भन्ने सोचाई हो । यो कत्ति हुने र संभव कुरा हो थाहा छैन । साथै म्याथ र साइन्स पढ्ने साथीहरू धेरै नै छन् ।
बुटवलमा ४ जिपिए आयो, किन होराइजनमा नै अध्ययन ? काठमाडौंबाट अफर आएनन् ?
म अध्ययन गरेको नै न्यू होराईजन इङ्ग्लिस बोर्डिङमा हो । सरकारले ल्याएको प्लस २ सम्म पनि विद्यालय लेबल हो भनेको हुनाले हामीलाई नयाँ ब्याचको रूपमा यहाँ नै पढ्ने व्यवस्था गरियो । जहाँ पढे पनि पढ्ने हो । प्लस टु यहाँ भए यहाँ पढ्छु । काठमाडौं बाट अफर पनि नआएका होइनन् । आफ्नै ठाउँमा घरमा नै बसेर अध्ययन गर्दा सजिलो पनि भयो ।
अध्ययनको क्षेत्रमा परिवारको दबाब आयो ?
मेरो हकमा कुरा गर्दा परिवारजनले धेरै नै साथ दिनुभयो । मलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइदिनुहुन्थ्यो । मेरो परिवारबाट कुनै पनि किसिमको दबाब आएन । मेरो रोजाईमा नै फ्याम्ली सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
अबको अध्ययनको लागि दबाब कत्तिको छ ?
अध्ययनको लागि दबाब त छ नै । एसईईमा ४ जिपिए आयो । अब पनि त्यही लेबलमा आउनु पर्दछ । यसको दबाब हो । यो बाहेकको दबाब छैन ।
अध्ययनको लागि कस्तो वातावरण चाहिन्छ ?
मानिस अनुसार नै यसको जवाफ फरक फरक हुन्छ । कसैलाई ग्रुप स्टडी राम्रो लाग्छ भने कसैलाई शान्त स्थान मन पर्छ । मलाई भने ग्रुप स्टडी मन पर्दैन । मलाई एक्लै बसेर अध्ययन गर्न मन पर्छ । मेरो हकमा कुरा गर्दा एक्लै बसेर पढ्दा अलि स्मरणीय हुन्छ ।
माथिल्लो तह अध्यननको लागि के गर्नुहुन्छ ?
प्ल टुसम्म त म न्यू होराईजनमा नै अध्ययन गर्छु । ब्याचलर लेबलको लागि काठमाडांै जान्छु । बाँकी अध्ययनको लागि विदेश जान्छु । तर विदेशबाट फर्केर नेपालमा नै डाक्टर बनेर सेवा गर्ने मेरो चाहना र लक्ष्य हो । र यो पूरा गर्ने नै छु ।
राजनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? सक्रियताको अवस्था के हुन्छ ?
प्लस टु मा अध्ययन गर्न शुरु गरे पश्चात राजनीतिमा त लाग्छन् । मलाई खासै राजनीतिमा सक्रिय हुन मन छैन । तर राजनीतिको बारेमा बुझ्न अति नै मन लाग्छ ।
राजनीतिले शिक्षाको क्षेत्रमा के गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
राजनीतिले नै सबै कुराको निर्धारण हुने हुँदा कुनै पनि द्विविधा नहुने खालका नीतिहरू बनाओस् । यसले देशको समग्र शिक्षालाई नै उत्कृटता प्रदान गर्नेछ ।
कुनै पनि विद्यार्थीले अध्ययनमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि के आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्छ ?
सबैभन्दा पहिला त परिवारको साथ हो । सँगै विद्यालयमा शान्त वातावरणको आवश्यकता पर्दछ । साथै विद्यार्थीहरू सेल्फ स्टडी, स्कुलमा टिचरहरूसँगको उचित भेटघाट, सूचनाको आदान प्रदान तथा पर्याप्त प्राक्टिकलको ब्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
अध्ययनबाहेक अन्य के कुरामा रुचि छ ?
मलाई कविता लेखन तथा वाचनको रुचि छ । म समय मिलेसम्म साहित्यमा रुचि पनि राख्छु । योसँगै मेरो रुचि ड्रोइङमा पनि छ । पेन्टिङ गर्छु ।
शिव सुवेदी /आइतवार, अशोज २८, २०७५